Opinions & Discussion » အခြေအနေ မကောင်း ဗူး… Sq back to 1	12
အတုဆိုမှတော့အစစ်ပြန်ရေးဖို့သာရှိသည်။ ဘွားဒေါ် လွှတ်တော်တွင်းမှ ထွက်သွားစရာမလို..။ သွားမတက်ရုံသာရှိသည်။ ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်အမတ်မှ မဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါဆို ခြေဥအရ ပေါ်လာတဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲ ကော်မရှင်လည်း ဂရုစိုက်စရာမလို။ ဘပြောင်ဂျီးလည်း သမဒမဟုတ်… အူးရွှေမန်းလည်း ငှက်ကထမဟုတ်။ ဗိုစုတ်ဗူးဂျီးသမ်းရွှေ အာဏှာပိုင်ပဲ…။ အားလုံး တစ်ကနေပြန်စမည်. .. Square back to 1. About ဦးကြောင်ကြီး
ဦးကျောက်ခဲ says: အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတာ အသိသာကြီး…
kai says: ကကြောင့်လေအရဆို.. နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မှာ.. စိုးရိမ်နေရတာ.. စစ်တပ်မဟုတ်ပဲ.. ဒီချုပ်ဖြစ်နေရပြန်ပြီ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နှစ်ဖက်စလုံးက အားကုန်နေပြီ
ပြည်သူအပေါင်းကတော့ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ
တောင်ပေါ်သား says: Bravo Big-Cat
YE YINT HLAING says: အကို့ ကို ခင်ပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကောင်းသားပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit to Thant Htike
Alinsett @ Maung Thura says: သမထအစွမ်း ရှိတဲ့ ကြောင်ဆိုလို့ ဒီတစ်ကြောင်ပဲ မြင်ဖူးတယ်
မြစပဲရိုး says: ဒီမိန်းမကြီး ထက် ပိုတော်သည် ဟု ထင်ကြပါက ဒီအစိမ်းရောင် တွေ က ကိုယ့်ကို ကြောက်အောင် အရင် လုပ်ပြကြဦး လို့ ဘဲ ပြောမယ်။
YE YINT HLAING says: ဝေဖန်ရေးဆိုတာ
Mike says: .မကောင်းဗူး
Ma Ma says: (ဘာ ပြင်ဆင်ထားသလဲ။ အယင်လိုပဲ မတရားဘူး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိဘူး၊ ဆင်ဖမ်းမည် ကျားဖမ်းမည်နဲ့ပဲ ပြီးသွားကြမှာလား။)
ဆင်တွေ ကျားတွေ မဖမ်းပဲ ကြောင်ဖမ်းပြီး ရွေးဂေါက်ဗွဲ ငှက်ကထ လုပ်ခိုင်းလိုက်ရရင်ကောင်းမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.